မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ငှားရန် ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်းများ | ShweProperty.com
ငှားရန် - အမှတ်-2/6၊ဆိုင်ခန်းအမှတ်(7+14)(၂)ခန်းသမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ဟွန်ဒိုင်းကားshowroomဘေး
Kitchen Room/Toilet/Bath Room,ရေ+မီး...
Kitchen Room/Toilet/Bath Room,ရေ+မီး
ငှားရန် - LT1808004972: Commercial place for rent in Downtown
ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
* Location - Kyauktada * Living area - 2,600 sq-ft * Colonial style * Downtown area * Suitable for restaurant or office usage * Public area car parking * USD 2.5 per sqft for rent...
* Location - Kyauktada * Living area - 2,600 sq-ft * Colonial style * Downtown area * Suitable for restaurant or office usage * Public area car parking * USD 2.5 per sqft for rent
Listed 14 August 2018
ဖုန်းဆက်ရန်01, 8605255, 56
Asking Price :3USD
ငှားရန် - NGWE SAUNG BEACH PLAZA (15) SHOPS HOUSES
ငွေဆောင် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
လုပ်ငန်းရ,Own Meter,Transformer,Generator,Full Decoration,Carparking,Own motor,Power and lighting Line...
လုပ်ငန်းရ,Own Meter,Transformer,Generator,Full Decoration,Carparking,Own motor,Power and lighting Line
Listed5October 2016
Advertiser : Myo Min Win
Ngwe Saung Main Road
Phone no : 09-5197147
ငှားရန် - Office or Commercial Property for Rent in South Okkalapa
Office or Commercial Property for Rent in South Okkalapa Price. 8.5 lks Area. 1400 sqf (including Mazz Hall Type, Western Toilet, Suitable for Beauty Solon, Gym, Office and other Commercial use Please call 0943200669 or PM me for more information. More Property at our Facebook Page https://m.facebook.com/NICEREALESTATEMYANMAR/...
Office or Commercial Property for Rent in South Okkalapa Price. 8.5 lks Area. 1400 sqf (including Mazz Hall Type, Western Toilet, Suitable for Beauty Solon, Gym, Office and other Commercial use Please call 0943200669 or PM me for more information. More Property at our Facebook Page https://m.facebook.com/NICEREALESTATEMYANMAR/
Asking Price : 8.50 သိန်း
ငှားရန် - LT1811005242: Office space for rent in Mayangone
* Location - Mayangone * For office usage only. * 2RC building * Wifi-Secure & fast internet connections. * Rent include utilities, daily cleaning and maintenance. * Rent for Separate Floors (Rooms) Downstairs - 364 sq-ft $2,000 Upstairs - 680 sq-ft $3,500 Rent for the entire house $6,000...
* Location - Mayangone * For office usage only. * 2RC building * Wifi-Secure & fast internet connections. * Rent include utilities, daily cleaning and maintenance. * Rent for Separate Floors (Rooms) Downstairs - 364 sq-ft $2,000 Upstairs - 680 sq-ft $3,500 Rent for the entire house $6,000
ငှားရန် - Office For Rent (ID-29)
Office for rent in 8 miles, Mayangone Township. 1260 sqft , hall type. Office with2air-conditioners. Asking Price - 11 Lakhs (Nego) Office For Rent (ID-29) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊…...
Office for rent in 8 miles, Mayangone Township. 1260 sqft , hall type. Office with2air-conditioners. Asking Price - 11 Lakhs (Nego) Office For Rent (ID-29) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊…
ငှားရန် - လှိူင်မြို့နယ်ရွှေဟသာင်္လမ်းမ (ပေ၄၀×ပေ၆၀) ၂ထပ်တိုက်ဧ။်အောက်ထပ်ကိုငှားရန်ရှိပါသည်။(ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-…
လှိူင်မြို့နယ်ရွှေဟသာင်္လမ်းမ (ပေ၄၀×ပေ၆၀) ၂ထပ်တိုက်ဧ။်အောက်ထပ်ကိုငှားရန်ရှိပါသည်။အိပ်ခန်း(2)ခန်းဖွဲ့ထားပြီးကြွေပြားခင်းထားပါတယ်။အငှားဈေးနှူန်းမှာတစ်လလျှင်(7)သိန်းညှိနှိူင်း…...
လှိူင်မြို့နယ်ရွှေဟသာင်္လမ်းမ (ပေ၄၀×ပေ၆၀) ၂ထပ်တိုက်ဧ။်အောက်ထပ်ကိုငှားရန်ရှိပါသည်။အိပ်ခန်း(2)ခန်းဖွဲ့ထားပြီးကြွေပြားခင်းထားပါတယ်။အငှားဈေးနှူန်းမှာတစ်လလျှင်(7)သိန်းညှိနှိူင်း…
ဖုန်းဆက်ရန်09, 977901501, 12
09, 977901501, 12
Phone no : 09-977901501~12
ငှားရန် - OFFICE RENT (ID-28)
2520 sqft office space for rent in Tarmwe Township, near Ocean Super Market. Hall type. Asking Price - 1sqft 800 Kyats OFFICE RENT (ID-28) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. တာမွေမြို့နယ်၊ Ocean ဈေးဝယ်စင်တာအနီး၂၅၂၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသည့်…...
2520 sqft office space for rent in Tarmwe Township, near Ocean Super Market. Hall type. Asking Price - 1sqft 800 Kyats OFFICE RENT (ID-28) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. တာမွေမြို့နယ်၊ Ocean ဈေးဝယ်စင်တာအနီး၂၅၂၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသည့်…
Listed5November 2018
ငှားရန် - LT1810005223: Commercial property for rent in Kamaryut
* Location - Kamaryut *2storey house * Land size - 4,800 sq-ft (80x60) * Floor area - 5,600 sq-ft * Suitable for showroom, retail shop, office * Hall type * Generator * Public area car parking *$6,500 per month for rent...
* Location - Kamaryut *2storey house * Land size - 4,800 sq-ft (80x60) * Floor area - 5,600 sq-ft * Suitable for showroom, retail shop, office * Hall type * Generator * Public area car parking *$6,500 per month for rent
Nar Nat Taw Street
Asking Price : 6,500 USD
ငှားရန် - LT1810005218: Commercial property for rent in Mingalar Taung Nyunt
* Location - Mingalar T/N *6storied commercial building with lift * Floor area - 20,000 sq-ft (200x100) per floor * Already got hotel operation license ...
* Location - Mingalar T/N *6storied commercial building with lift * Floor area - 20,000 sq-ft (200x100) per floor * Already got hotel operation license
Bo Min Yaung Street
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ငှားရန် Real Estate ငှားရန် Property များ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ